Wasiir Koowaad Rooble Oo Ka Hadlay Dadkii Rayidka Ahaa Ay Ciidanka AMISOM Ku Dileen Degaanka Golweyn – Great Banaadir
MUQDISHO – Wasiir Koowaadka Dowladda Xilgaarsiinta ee Soomaaliya Maxamed Xuseyn Rooble ayaa lagu soo waramayaa in Gelinkii dambe ee Maanta uu ka hadlay Dadkii Rayidka ahaa ee Ciidanka Ugaanda (Uganda) ee qaybta ka ah AMISOM ay ku dileen Deegaanka Golweyn ee Gobolka Shabellaha Hoose.
Militariga Ugaanda ayaa 10kii Bishan si arxandaro leh Deegaankaasi ugu dilay Toddobo Qofood oo Beeraley u badnaa, iyadoona Eheladooda diideen in la aaso, illaa iyo inta Sharciga laga horkeenayo Askartii dishay.
“Xaqiiqdii waa arrin fool xun oo aad iyo aad aan uga damqanay, haddaan nahay Dowladda Soomaaliyeed. Waxaa halkaan igu soo booqday Safiirka Dowladda Ugaanda iyo Taliyaha Qaybta, iyagoo tacsi iigu yimid, iyagana waan u sheegay, Shacabka Soomaaliyeed-na waan u sheegayaa, marna aqbali mayno, raalina kama nihin in Shacabka Soomaaliyeed dhib loo gaysto, haddii ay tahay Ciidamo AMISOM iyo haddii ay tahay Ciidamo Soomaaliyeed,” ayuu yiri Wasiir Koowaad Rooble.
Wasiir Koowaadka ayaa yiri “Shacabka Soomaaliyeed waa lama taabtaan, haddii gacan ka gardaran ay wax u gaysatana anagaa diyaar u ah inaan u istaagno, na loona igmaday inaan xaqooda u istaagno. Sidaasi darteed waxaan leeyahay waalidiinta Soomaaliyeed iyo eheladoodii, samir Alle ha inaga siiyo.”
Waxa kaloo uu yiri “Waxaan magacaabay Guddi Wasiiro, oo kala ah Wasiirka Amniga, Wasiirka Arrimaha Gudaha, Wasiirka Gaashaandhigga iyo Wasiirka Cadaaladda, oo Berri ay halkaan kula kulmi doonaan Safiirka iyo AMISOM, arrintaas ayayna ka hadli doonaan. Insha’Allah waxaan rabaa in baaritaan lagu sameeyo, sida ugu dhaqsiyaha badana looga jawaabo, waxna looga qabto.”
Rooble ayaa intaasi ku daray “Safiirka iyo Taliyaha waa ii sheegeen in Dadkii Falkaasi geystay, gacanta lagu hayo, Maxkamadna la saarayo, sidaasi darteed anagana waan daba-galeynaa, wixii ka soo baxana gadaal ayaan idinkaga soo wargelinaynaa.”